Wasiirada Arrimaha Dibadda ee Wadamada G8 oo ugu baaqay Soomaalida inay fuliyaan hishiisyadii lagu gaaray London. | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Wasiirada Arrimaha Dibadda ee Wadamada G8 oo ugu baaqay Soomaalida inay fuliyaan hishiisyadii lagu gaaray London.
April 13, 2012 – Waxaa Shalay ku Kulmay magaalada Washington ee caasimadda dalka maraykanka Wasiirada arrimaha Dibadda ee wadamada la isku yiraahda G8, kulankanayaa waxaa loogu gogol-xaarayey kulan ay isugu imaan doonaan madaxda Sare ee Kooxda G8ka Bisha May 18-19, 2012, waxayna ku falnqeeyeen arimo badan oo ku saabsan caalamka hase ahaatee waxaa si gaar ah diiradda u saaray xaaladda dalka Soomaaliya.
War murtiyadeed ka soo baxay kulanka wasiiradda G8ka ayaa waxaa ku qornaa arimo badan oo si gaar ah u quseeya dalka Soomaaliya kuwaas oo ay kamid yihiin.
1-in la taageero soomaalida oo lagu gacansiiyo sidii ay uga gudbi lahaayeen marxaladda ay haatan ku jiraan.
2-in dhinacyada soomaalida ay fuliyaan qodobadii ka soo baxay hishiisyadii ay ku gaarayn Garoowe kuwaas oo kala dhacay December 2011 iyo February 2012.
3-in dhiacyadaasi ay sii laba jibbaaraan dadaalkooda islamarkaana ay isku taxalujiyaan sidii ay ugu bixi lahaaayeen xilliga kumeel gaarka iyo fulinta qorshaha roadmapka Somalia oo gacanooda ay ku saxiixeen.
5-in loo diyaar garoowe wixii ka dambeeya bisha August oo ay ku egtahay waqtiga dowladda xilligaasna ay dhacayaan doorashooyin.
6- G8 waxa ay soo dhaweenayaan shirkii London ee dhacay bishii February iyo qodobadii shirkaasi ka soo baxay , waxa ay sidoo kale taageeraysaa shirarka soo socda ee ka dhacaya dalalka Turkiga iyo talyaaniga kuwaas oo looga hadlayo arimaha dalka Somalia .
7- kooxdu waxa ay diiradda saaraysaa sidii dowladda KMG ay uga gacan siin lahayd la dagaalanka kooxaha argigixisada geeska Africa .
8-waxa ay sidoo kale xoojinaysaa la dagaalanka kooxaha burcad badeedda soomaalida oo afduubka u geesta maraakiibta isticmaasha biyaha caalamka.
9- kooxdu waxa ay sidoo ay kordhinaysaa gargaarka ay siinayso soomaalida si ay u8ga samatabaxaan dhibaatada ka dhalatay abarta haysata.
Sida la wada ogsoon yahay Wadamada G8ka ayaa waxaa ka mid ah dalalka France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the United States , iyo dalka Canada , sidoo kale waxay sheegeen inay ka go’antahay inay caawiyaan dalka Soomaaliya.
Wasiirka dastuurka Soomaaliya oo shaaciyay inaan la aqbali doonin cid aysan soo xulin hogaamiyayaashii dhaqanka ee hore (SAWIRRO) Halkaan hoose ka daawo Heesta loo sameeyay saxiibtinimada walaalaha Turkiga iyo Somaliya.